> Resource> Utility> Gmail Paswọdu esi: Olee ịgbawa / mbanye anataghị ikike gị Gmail Paswọdu
Olee otú ịgbawa Gmail Paswọdu
Mgbe ị na-chefuru paswọọdụ gị Gmail, ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ email ma mara azịza ndị ziri ezi nche ajụjụ, ị nwere ike nweta n'ime gị Gmail ọzọ mfe si Gmail Official Site. Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara inwe azụ paswọọdụ si ukara saịtị, e na ka abụọ ngwọta maka gị: ị nwere ike na-azụ gị echefu paswọọdụ maka Gmail si Chrome / FireFox nchọgharị ma ọ bụ iji a Gmail paswọọdụ esi / hacker.
Ịgbawa Gmail Paswọdu si Chrome / FireFox Brower
Ozugbo i na-akpaghị aka ite gị Gmail akaụntụ na Chrome / FireFox nchọgharị na kọmputa gị, ị nwere ike mfe na-ele na jikwaa zọpụta paswọọdụ ugbu a. Lee, m ga-egosi gị otú ịgbawa Gmail paswọọdụ si Chrome nchọgharị.
Input "chrome: // ntọala /" na gị na Chrome mbụ.
Mgbe ahụ mkpa ka ị họrọ "Gosi Advanced Ntọala" na ala nke window iji nweta "na-azọpụta Okwuntughe Management" nhọrọ.
Accounts na i na-akpaghị aka ite na Chrome ga-egosipụta na window. Ị nwere ike họrọ gị Gmail akaụntụ ma họrọ "Gosi" na paswọọdụ taabụ. Mgbe ahụ, gị Gmail paswọọdụ ga-egosipụta na mbụ na i nwere ike inwe ya laghachi azụ.
Jiri Gmail paswọọdụ hacker / esi na Windows 8/7 / Vista / XP
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike ịgbawa Gmail paswọọdụ si Chrome / FireFox nchọgharị, Gmail paswọọdụ hacker / esi nwekwara ike inyere
Nke mbụ niile, ị chọrọ iji nweta a Gmail paswọọdụ esi. Ọ bụrụ na ị na-enweghị nhọrọ, ebe a bụ m nkwanye: Wondershare WinSuite 2012, a pụrụ ịtụkwasị obi na omume nke nwere ike inyere ịgbawa Gmail paswọọdụ ke 3 nzọụkwụ na-enweghị hassle.
Step1. Ẹkedori Gmail paswọọdụ esi
Ẹkedori Gmail paswọọdụ hacker na kọmputa gị, ma pịa "Paswọdu & Key Finder" nhọrọ n'elu, na-ahọrọ "Paswọdu Finder" na hte sidebar, ị ga-enweta ihe interface n'okpuru.
Step2. Họrọ Gmail / Google Talk paswọọdụ
Họrọ Gmail na-aga. Ke adianade do, a Gmail paswọọdụ esi na-enyere gị aka ịgbawa okwuntughe nke MSN, Hotmail, Yahoo mail na ndị ọzọ.
Step3. Anataghị ikike Gmail paswọọdụ ugbu a
Ugbu a, i nwere ike inwe gị Gmail akaụntụ na paswọọdụ na window n'okpuru. Na ị na-aga nke ọma hacked gị Gmail paswọọdụ ugbu a. Iji zọpụta ya, ị nwere ike dee ya ala na gị akwụkwọ ma ọ bụ mbupụ na-azọpụta ya na kọmputa gị.
Cheta na: Ọ bụ iwu na-akwadoghị iji naghachi ndị ọzọ 'Gmail okwuntughe enweghị ikike. Ngwá ọrụ a na-iji naghachi nanị onye ọrụ akaụntụ mgbe ọ dị mkpa.
Olee otú Idozi Fltmgr.sys Blue ihuenyo Error
Olee otú Idozi Msvbvm60.dll Error Easily na ngwa ngwa